ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: December 2008
အောင်လိုသူမှန်သမျှ နည်းလမ်းသည်အရေးကြီးသကဲ့သို့ စည်းကမ်းသည်လည်း အရေးအလွန်ကြီး၏။ လူ့လောကတွင် စည်းကမ်းဥပဒေ စသည်တို့ကိုကျယ်ပြန့် များပြားစွာ သတ်မှတ်ထားရ၏။ အောင်လိုသူသည် စည်းကမ်းဟူသမျှကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူဖြစ်ရ၏။
စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ မလွဲမသွေ လိုအပ်သောကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရသော ချုပ်ချယ်မှုဖြစ်၏။ လူသည် မိမိတစ်ဦးတည်း မနေနိုင်သောကြောင့် အများနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ ပူးပေါင်းနေနိုင်ရေးအတွက် ပေါ်ပေါက်လာရသော လိုလားအပ်သည့် ချုပ်ချယ်မှုများဖြစ်သည်။
အောင်မြင်သူမှန်သမျှသည် နည်းလမ်းကောင်းသကဲ့သို့ စည်းကမ်းလည်းကောင်းကြ၏။ ပြောရာ၊ လုပ်ရာ၊ စားရာ၊ သွားရာ နှင့်အရာရာတွင် စည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်နေခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းအစ ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းရှိစွာ ရိုးသားဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သော အပြောအဆို အပြုအမူသည် ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ၏ ကျောရိုးပင်ဖြစ်သည်။
၆။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတို့ ဖြစ်၏။
ပညာအခံရှိပြီး ဇွဲနှင့် စည်းကမ်းကောင်းက အောင်မြင်ခြင်းများသည် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရနိုင်သည်။ အကွပ်မဲ့ကြမ်းမှန် သမျှ ပရမ်းပတာ ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့ စည်းကမ်းမဲ့သူမှန်သမျှလည်း ပရမ်းပတာဖြစ်တတ်၏။ စည်းကမ်းသည် လူ့တန်ဖိုး ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းရှိမှ လူပီသ၏။ စည်းကမ်းရှိသော လူနှင့်စည်းကမ်းမဲ့သော လူသည် ဘ၀တိုးတက်ခြင်း ကွာခြားသကဲ့သို့ အတူလည်း ပေါင်းသင်းပြီးလည်း မနေနိုင်ပါ။ ဘာသာရေးပညတ်ချက်များသည်လည်း စည်းကမ်းများပင် ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အခြေခံဖြစ်သော ငါးပါးသီလ၊ ခရစ်ယာဉ်ဘာသာဝင်တို့၏ ပညတ်တော် (၁၀)ပါး စသည်တို့သည် လေ့လာကြည့်လျှင် လူတို့ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်အောင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းကြီးများဖြစ်သည်။
အစားမှာလည်း စည်းကမ်းရှိရသကဲ့သို့ စကားမှာလည်း စည်းကမ်းရှိရသည်။ စည်းကမ်းမရှိသော စကားလေးတစ်ခွန်း ကလည်း အမှားကြီးတစ်ခုကို မှားတတ်၏။ အလုပ်တစ်ခု ကိုသော်လည်းကောင်း ၊ ဘ၀တစ်ခုကိုသော်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲသွားတတ်၏။
စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းသည် အသေးအဖွဲကလေးများမှ စတင် စည်းဖောက်ရာမှ အလေ့စွဲလာခြင်းဖြစ်၏။ မကောင်းသော အကျင့်နှင့် စည်းကမ်းမဲ့မှုသည် အသေးအဖွဲကလေးများမှ တစ်စတစ် အရင့်အမာကြီးဖြစ်အောင် စွဲတတ်ကြသည်ကို သတိပြုရမှာဖြစ်သည်။
စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်းကျစွာနှင့် ကောင်းစွာ ဆင်ခြင်လေ့ရှိသောသူသည် အမှားအယွင်းနည်း၏။ စည်းကမ်းနှင့် ကြိုတင်ကောင်းစွာ ဆင်ခြင်သောကြောင့် မှားခြင်းမရှိနိုင်။ ထိုသို့သော လူများသည်၊ ရိုးရိုးလုပ်ပြီမဆင်ခြင်သော လူများထက် အောင်မြင်ရေးမှာ ခရီးပေါက်တတ်သည်။
လူတစ်ဦးတွင် အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ စာရိတ္တနှင့် စည်းကမ်းဖြစ်သည်။ မိမိဘ၀ကို မြတ်နိုးလျှင် အချိန်ကိုလည်း စည်းကမ်းကြီးစွာ ထားရ၏။ အချိန်ကိုစည်းကမ်းမဲ့က ဘ၀ရှေ့ရေးသည်လည်း စည်းကမ်းမဲ့သွားတတ်၏။ တွေးခေါ်ရှင်ဘင်ဂျမင်ဖရင်ကလင်က. . .
ဘ၀ကိုမြတ်နိုးသလား၊ မြတ်နိုးလျှင် အချိန်ကိုမဖြုန်းနှင့် ဘ၀ဆိုသည်မှာ အချိန်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ဟုဆို၏
ပြောရာတွင် စည်းကမ်း ၊ လုပ်ရာတွင် စည်းကမ်း၊ သွားရာတွင် စည်းကမ်း၊ အချိန်တွင် စည်းကမ်း၊ အရာရာတိုင်းသည် စည်းကမ်းသည် အရေးကြီးတကာ့ အရေးကြီးပါ ကြောင်းရေးသား တင်ပြ အပ်ပါသည်။
သုတေသီ ဘုန်းမြင့်သွေး (လမ်းမှန် ကမ်းမှန် အောင်စိတ်သန်)
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, December 30, 20083comments:
အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူ့လောကမှာရော၊ နတ်လောကမှာရော အခြားအခြားသော ဘုံဘ၀ဆိုးမှား မှာရော မရှိပါဘူး။ အကြောင်း ကောင်းခံရင် အကျိုးကောင်းရလာမှာဖြစ်သလို အကြာင်းဆိုးခံရင် အကြောင်းဆိုးရလာမှာပါ ။
များသောအားဖြင့် လူအများစုဟာ မဟုတ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ မကောင်းကျိုးခံရတယ်ဆိုပြီး ညည်းတတ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် မကောင်းတာကိုမလုပ်ဘဲ မကောင်းကျိုးခံရတာကလည်း ဘ၀ဘ၀က မကောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေဟာ အကျိုးပေးချိန်တန်တော့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပြီး မကောင်းတဲ့ ဆိုးလောကဓံနဲ့ ကြုံရတတ်တာဖြစ်ပါတယ် သံသရာကလည်း အရှည်ကြီးပါ။ ဘယ်အချိန်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့မှန်းမသိဘဲ ဘာမှမလုပ်တဲ့ အခါကျမှ မကောင်းတဲ့ဒဏ်ကို ခံရတာတရားပါ့မလားလို့မေးရင် တရားပါတယ်လို့ပဲ ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူများလုပ်တာ ကို ကိုယ်က အငှားခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့မကောင်းကျိုးကိုသာ ကိုယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းတာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးရဲ့နဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ကောင်းစားနေလိုက်ကြတာမှလို့ တွေးမယ်၊ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး။ မကောင်းမှုကြောင့် ခံစားရမယ့် မကောင်းကျိုးကလည်း အချိန်မစေ့သေးလို့ အကျိုးမပေးတာပါ. အချိန်စေ့ရင်တော့ ဘယ်လိုနေရမျိုးမှာသွားပြီး ပုန်းနေနေ မလွတ်ဘူးဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းမှုအား လျေားပါးသွားအောင် ဖြစ်နိုင်ရင် ပပျောက်သွား အောင် သတိတရားနဲ့ ကြိုးစားရပါတယ်။ သတိဆိုတာကတော့ မမေ့မလျေားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သတိထားပြီး မကောင်းမှုရှောင်ကာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များကို လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ မကောင်းတာကို ဘာမှမလုပ်မိဘူးထင်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေလိုက်မိရင် မရေတွက်နိုင်တဲ့ မကောင်းမှုတွေကို လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ အဲလိုမဖြစ်အောင် ပညာနဲ့သတိကို လက်မလွှတ်တမ်း ဆောင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိအမြဲထားနေသူဟာ သတိထားတဲ့အကျင့်မြဲလာတာနဲ့အမျှ မကောင်းတာကို ရပ်ပစ်ပြီး ကောင်းတာကို ဆထက်တစ်ပိုး တိုးပြီးတော့ လုပ်တတ်လာတာ ပါပဲ။ ကောင်းမှုတွေများများ လုပ်ကျင့်ရှိလာလေ မကောင်းတဲ့ဆိုး လောကဓံကို ခံစားရတဲ့အဖြစ်တွေကနေလွတ် လာပါတယ်။
တကယ်တမ်းမရင့်ကျက်သေးခင်ကတော့ ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မှာသူက မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ စကားတွေကိုပြောတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သံသရာရှည်သရွေ့မှာ သူ့ကိုဘယ်လောက်များ နိုင်လိုမင်းထက် လုပ်ခဲ့မှန်းမှ မသိတာ ။ အဲလိုလုပ်ခဲ့လို့ သူ့အကြွေးကို ပြန်ဆပ်ရလေပါပဲ။ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကို အဖတ်များလေလေ၊ ကြားနာရတာများ လေလေ ကိုယ့်ဘက်က ခံရတဲ့ကိစ္စကို ဖွင့်ဆိုတာ ပြောင်းသွားလေလေပါပဲ။
ယောဆရာတော်ကြီးဆုံးမတော်မူ တာကိုလည်း တင်ပြလိုပါတယ်။ ကောင်းမှုကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်တဲ့သူဟာ မကောင်းမှုများစွာကို ပပျောက်စေနိုင်တယ်တဲ့။ ကောင်းမှုက အားကောင်းလာတဲ့အတွက် မကောင်းမှုများကို ဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ် လို့မိန့်တော်မူ ခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မယ့် နှစ်သစ် 2009 ခုနှစ်မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို များများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး မကောင်းမှုများကို တတ်နိုင်သမျှလျော့နည်းသွားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်းရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, December 28, 20086comments:
ရေးသားသူ poemflower at Friday, December 26, 20085comments:
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, December 23, 2008 8 comments:
လောကတွင် ဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို လိုက်စားနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် သေမချင်း ပညာရှာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရှာဖွေသူများအနေဖြင့် ပညာရကြောင်း အကြောင်း ၈ ပါးကို သိထားတဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ အသက်အရွယ်အားလျှော်စွာ ပညာရရှိနိုင်ပါတယ်
အခုခေတ်မှာ သိစရာ တတ်စရာတွေက တစ်ပုံကြီးပါပဲ။ မိမိရဲ့ စီးပွားရှာနေတဲ့ လုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးတက်အောင် လိုအပ်တဲ့ ပညာကို ဆက်လက် ဆည်းပူးရပါသေးတယ်။ အရွယ်အလိုက် သိသင့် တတ်သင့်တဲ့ ပညာများကို သင်ယူလေ့လာနေရမယ်လို့ ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘွဲ့တော့ ထပ်မယူတော့ပါဘူး ဆိုပြီး ရပ်ထားလိုက်ရင် ဘွဲ့ယူတဲ့ ကိစ္စကိုသာ ရပ်ထား လို့ရပါတယ်။ပညာရှာတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ရပ်ထားလို့ မရပါဘူး။ဘ၀ဆိုတာကိုက ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှာခြင်းဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အရွယ်အလိုက် မရပ်မနားနေရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်။စာဖတ်တဲ့ သူဆိုတာ အသိပညာကို ပိုမို စုဆောင်းမိရုံ မကပါဘူး။ အတွေးအခေါ်လည်း ရင့်ကျက်ပါတယ်။ ခံစားမှုလည်း ဟန်ချက်ပိုပြီး ညီပါတယ်။သူက ကမ္ဘာလောကမှာ ဘာတွေ တိုး တက်ပြောင်းလဲနေသလဲ ဆိုတာကို မျက်ခြေမပျက် သိနေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု အချက်အလက်တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သတ် ရင် ဟိုတုန်းကတော့ ဘယ်လိုယူဆကြ တယ်။ အခုတော့ အချက်အလက်အသစ်တွေ ထပ်တွေ့လို့ ပိုပြီး နားလည် လာကြပြီကွဲ့ ဆိုတာမျိုးကို ဖြည့်စွပ်ပြီး သင်ပြနိုင်တယ်။ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာပြီး ညွှန်ပြနိုင် တယ်။ သွန်သင်နိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အချိန်တိုင်းလိုလို ပညာရနိုင်သူ အနေနဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် ရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့ အခါ ပိုမိုကြွယ်ဝတဲ့ အသိလိမ္မာများကို ရနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ဟာ ပညာရှာ ရာမှာ အဟန့်အတား မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
နောက်တစ်နည်း ကတော့ အသိုင်းအ၀ိုင်း အခြံအရံကြောင့် ပညာရနိုင်တာ ရှိပါသေးတယ်။ မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြဆိုကြနဲ့ စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားလာပြီး ပညာကို လိုလား တဲ့သူ ပညာတော်တဲ့ သူ ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ်။
၃။ဆွေးနွေးမေးမြန်း စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့်လည်း ပညာရနိုင်ပါတယ်။
ပညာရနိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးမေးမြန်း စူးစမ်းလေ့လာဆိုတဲ့ နည်းများဟာ ပညာရရာရကြောင်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာ ပညာယူတတ်တဲ့ ဓလေ့က ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြီးလာတဲ့ အထိ ဖွံဖြိုးလာရမှာပါ။
၄။ပညာရပ်တစ်ခုကိုအမြဲ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အတွက်လည်း ပညာရနိုင်ပါတယ်။
ပညာရပ်တစ်ခုကိုအမြဲ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အတွက်လည်း ပညာရနိုင် ပါတယ် ဆိုတဲ့ အချက်မှာ ဆိုရင် ပညာသင်ကြားနည်းမှာကိုက လက်တွေ့ပါဝင် လုပ်ကိုင်တဲ့ နည်းဟာ ပညာသင်ယူခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးနည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။တွေ့မြင်သမျှတို့ကို အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းခြင်း သဘောသဘာဝတို့ကို စဉ်းစားဝေဖန်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ပညာရရှိနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းမှာ နှစ်အတန်ကြာ သင်ထားတာလောက်နဲ့ တစ်သက်လုံးအောင်မြင်တဲ့ လူတစ်ယောက် လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဘ၀တစ်ခုလုံး ဖြတ်သန်းတဲ့ အခါ သင်ရိုးလည်းရှိ ကျောင်းလည်းရှိတဲ့ သင်တန်းရှိသလို သင်ရိုးတော့ ရှိပါရဲ့ ကျောင်းရယ်လို့ တိတိကျကျ တတ်ရတာ မရှိတဲ့ သင်တန်းများလည်းရှိပါတယ် ။ဆိုလိုချင်တာက သင်သမျှကို ဆက်စပ်တွေးခေါ် ရမယ်လို့ ဆိုတာပါ။
၆။အစဉ်မပြတ် လေ့လာဆွေးနွေး ဟောပြောနေခြင်းကြောင့် လည်း ပညာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပညာကိုလိုတဲ့ သူဆိုတာ အစဉ်မပြတ် လုပ်နေတတ်တဲ့ သူဖြစ်ရပါမယ်။ ပညာကို ရှာတဲ့ အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာကိုပိုမို သွားအောင် လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀ီရိယကို မလျော့စေရပါဘူး။ကိုယ့် မှာ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရှိအောင်ကြိုးစားပါ။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကို တာဝန်ယူလိုက်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ သူတစ်ပါး မဖတ်တဲ့ စာအုပ်များကို စိမ်ပြေနပြေ ဖတ်နိုင်ပြီး ပညာတိုးပွားလာမှာပါ။
၇။ချစ်ခင်မှုကြောင့် အတတ်ပညာများကို သင်ကြားပေးသဖြင့်လည်း ပညာ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီစကားကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင် ကျော်က မိလန္န မင်းကြီးက ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ လောက တံတွာ ဆိုတာကတော့ ချစ်ခင်တဲ့ သူအချင်းချင်း ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်လို့ ရှိရင် ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြေပြစ်ပါတယ်။ စည်းရုံးမှု ရှိပါတယ်။ အဆင်ချောပါတယ်။
လူတွေဟာ အချိန်ကာလ ပြောင်းလဲ လာတာနဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲတဲ့ စနစ်တွေ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယ တွေကြောင့် အတတ်ပညာ များလည်း ပိုပြီးတတ်ကြရပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်မှာ အရင်လို ကတ်တလောက်နဲ့ ရှာတာ ခေတ်ကုန် သွားပါပြီ။ ကွန်ပျူတာကို သုံးနေကြပါပြီ။အချိန်ကာလအလိုက် တိုးတက်တာနဲ့ အမျှ ပညာရနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက် အားသာ ချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သူတွေ များလာအောင် ပညာကို ရှာရပါမယ် ။
ရေးသားသူ poemflower at Friday, December 19, 2008 1 comment:
ဆောင်းတွင်းကာလ ကျန်းမာလှပစေဖို့ နည်းလမ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်းတွင်းဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေလောက် ခိုက်ခိုက်တုန် အောင် ချမ်းနေတာမျိုးမဖြစ်ပေမယ့် တခြားရာသီတွေထက်စာရင်အေးကာ ဆောင်း အငွေ့အသက်လေးတွေ လွမ်းခြုံနေပါတယ်။ မနက်အစောပိုင်း နဲ့ ညပိုင်းတွေမှာ ရာသီဥတုချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေတတ်ပြီး တိုက်ခတ်တဲ့လေတွေက လည်း အေးနေတတ်ကာ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီလိုရာသီ ဥတုမျိုးမှာ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ၊ တုတ်ကွေး၊ လည်ချောင်းနာ အဖြစ်များ တတ်ကြတဲ့အတွက် ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင် ကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေခြောက်သွေ့အသားပပ်ကာ နှုတ်ခမ်းကွဲတတ်တဲ့ အတွက်လည်း ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာဖို့အတွက် ဆောင်းတွင်းမှာ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အချက်တွေကတော့
(၁) ရောဂါကူးစက်နေသူနှင့် ဝေးဝေးမှာနေပါ။
(၂) လက်ကို စင်ကြယ်စွာဆေးပါ။
(၃) မိမိနေမကောင်းဖြစ်နေလျင် တခြားသူများကို ရောဂါပိုးမဖြန့်ဝေပါနဲ့။
(၄) နေမကောင်းဖြစ်လျှင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကောင်းကောင်းအနားယူလိုက်ပါ။
(ရ) ဗီတာမင် စီသုံးဆောင်ပါ။
(၈) ဗီတာမင် အီးသုံးဆောင်ပါ။
(၉) အသားအရေကို မခြောက်သွေ့အောင် ရေများများသောက်ပါ။
(၁၀) နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့ခြင်း ကို ကာကွယ်ရန် နှုတ်ခမ်းဆီကို ပုံမှန် အသုံးပြုပါ။
(၁၁) ပရိုတင်းဓာတ်များများပါသောကြက်သား၊ကြက်ဥ စသည်တို့ကို များများစားပါ။
(၁၃) ဆေးလိပ်သောက်သူများ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
(၁၄) အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ၊ တုတ်ကွေး၊ လည်ချောင်းနာ ခြင်းကို သက်သာစေရန် ကြက်စွတ်ပြုတ် အရည် သောက်ပါ။
(၁၇) ထောပတ်သီး၊ အသီးအနှံဖျော်ရည်၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ဗာဒံစေ့၊ မြေပဲစေ့၊ ချင်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ အဆီရှိတဲ့ငါး အစရှိသည်တို့ကို များများစားပါ။
(၁၉) သက်ကြီးရွယ် အိုများကို အထူးဂရုစိုက်ပါ။
(၂၀) တစ်နှစ်တာလုံးပင်ပန်းသမျှပြေပျောက်စေဖို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ပါ။
ဒေါက်တာနုမြတ် (အာရောဂျံ၊ ဒီဇင်ဘာလ)
ရေးသားသူ may16 at Thursday, December 18, 2008 1 comment:
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မိန်းမလှကျွန်း ငှက်မျိုးစိတ်သစ်ကိုးမျိုး ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိ
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသော ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့နယ် ရှိ နာမည်ကျော် မိန်းမလှကျွန်း ဘေးမဲ့တောတွင် မှတ်တမ်းမတင်ရသေးသည့် ငှက်မျိုးစိတ်သစ်ကိုးမျိုးကို ထပ်မံဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံငှက် ၀ါသနာရှင် အသင်းမှပြော ကြားခဲ့သည်။
အင်အားပြင်းသည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ငှက်မျိုးများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကောင်ရေ လျော့မှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုတေသန ပြုကြစဉ် ငှက်မျိုးစိတ်သစ်ကိုးမျိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်းတို့မှာ . Collared Kingfisher (ပိန်ညှင်းမျိုးနွယ်)၊Chestnat-Winged Cuckoo, Red-wattled Lapwing (တစ်တီတူး)၊Ospray (၀ံလတ်)၊ Yellow Bitten (ဆတ်ဗျိုင်း)၊ Painted-Stork (ငှက်ကျား)၊ Ashy Drango(ငှက်တော် )၊ Blue-throated Flycatcher, Citrine Wagtail (မြီးညှောင့်မျိုးနွယ်ဝင် ) တို့ဖြစ်သည်။
ဧရိယာစုစုပေါင်း ၃၃၇၇၉ ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် မိန်းမလှကျွန်း ဘေးမဲ့တောအတွင်း ငှက် ၁၁၁မျိုး၊ ခိုငှက် ၅၀မျိုး စုစုပေါင်း ၁၆၁မျိုးနှင့် ယခုအခါတွင် ငှက်မျိုးစိတ် ၉မျိုးကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ငှက်မျိုးပေါင်း ၁၇၀ မျိုးနေထိုင်လျက်ရှိပြီး ၅၀ %မှာ ရေပျော်ကမ်းခြေ ငှက်များ ဖြစ်ကြောင်း မိန်းမလှကျွန်းဘေးမဲ့တော အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံမှတ်တမ်း များအရသိရှိ ရပါသည်။
သတင်း ၊ Living Color ( December 2008)
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, December 18, 2008 1 comment:
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မိန်းမလှကျွန်း ငှက်မျိုးစိတ်သစ်က...